मासिदै गएको खुलामञ्चमा किन रोपियो खरीको बोट ?
काठमाडौं । संघको राजधानी काठमाडौंको मुटु क्षेत्र खुलामञ्चमा खरीको बोट रोपिएको छ । वरिष्ठ वनस्पतिविद डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठले खुलामञ्चमा खरीको बोट रोपेका हुन् । सम्पदा बचाउ अभियान अन्तर्गत डा. श्रेष्ठले शनिबार एउटा खरीको बोट रोपे ।
राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रुपमा अति महत्वपूर्ण रहेको खुलामञ्च मासिँदै गएको र त्यससँग जोडिएका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वका पक्षहरु पनि मेटिँदै गएको परिवेशमा त्यसलाई जोगाइ राख्ने उद्देश्यसहित खरीको बोट रोपे ।
खुलामञ्चमा पहिले दुईवटा खरीको रुख रहेकोमा अहिले एउटा मात्रै छ । एउटा रुख काटिएको छ । खुलामञ्चमा रहेका दुई खरीका रुख राजनीतिक तथा सांस्कृतिक महत्वका थिए । एउटामा राजनीतिक सभासहितका कार्यक्रम हुने र अर्को सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने रुख थिए ।
तर, एउटा बोट काटिएसँगै सांस्कृतिक पक्ष संकटमा परेको भन्दै डा. श्रेष्ठले खरीको बोट रोपेको सुनाए । विगतमा नेपालका महत्वपूर्ण निर्णय, राजनीतिक अभियान तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको केन्द्र रहेका खरीलाई पुनःस्थापित गर्न वृक्षरोपण गरिएको डा. श्रेष्ठको भनाई छ ।
<<< : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय पुर्नगठन : राजीनामा दिने १६ जना, हस्ताक्षर ६ जनाको मात्रै
नाइट क्लब जाने विमलसहित चार खेलाडी राष्ट्रिय टोलीबाट बर्खास्त : >>>